lundi, 10 février 2020 22:49
Kraomita Malagasy: Mitaky ny karamany roa volana ny mpiasa
Nanao hetsika fitakiana karama roa volana desambra 2019 sy janoary 2020 ny mpiasan’ny orinasam-panjakana KRAOMA (Kraomita Malagasy) ao Brieville Andriamena, androany.
lundi, 10 février 2020 22:47
Ambatondrazaka: Voasambotra ireo jiolahy mpamaky trano sady mpanolana
Voasambotra androany maraina tao Antsahalava, zanabohitra ao amin’ny Fokontany Atsimondrova eto Ambatondrazaka androany maraina ilay jiolahy mpamaky trano, sady mpanolana nampitaraina ny mponina tao amin’io Fokontany io.
Voasambotra ihany koa ny lehilahy iray « gardien », manafina ireo jiolahy sy ny entana halatra, isaky ny avy manafika izy ireo.
Androany ihany dia natolotra ny Fampanoavana izy roalahy ireo, ary notanana am-ponja vonjimaika. Mitohy ny fikarohana ireo namany.
lundi, 10 février 2020 22:15
Tarika Wawa: Hiezaka ny tarika hampahafantatra sy hizara ny « salegy » any ivelany
Nigadona teto Nosy-Be i Wawa androany, taorian’ny nandraisany ny loka « Mozika Salegy – Spécial » tamin’ny fifaninanana RDJ Mozika 2019.
Nisy ny fitsenana azy manokana hatreny amin’ny seranam-piaramanidina Fascene niazo ny tanàna.
17 taona izao ny tarika Wawa tarihin’i Andrihamahazo Joel Issoubaly, fa izay no tena anarany. Nilaza izy tamin’ny tafa fohy teo ampahatongavana teo Fascene fa hijanona tsy andray anjara amin'ny fifaninanana RDJ ka nitsodrano ireo artista rehetra kosa mba hanohy hatrany.
Manomboko izao kosa ny tarika dia hiezaka hitety an’izao tontolo izao hampahafantatra sy hizara ny « salegy » mba ho laza sy reharehan'i Madagasikara. Hiezaka hiaraka hihira sy andihy ny « salegy » miaraka amin'ireo mpanakanto fanta-daza maneran-tany i Wawa.
lundi, 10 février 2020 16:06
Fantatrao ve: Mirefy 1435mm ny elanelan'ny lalamby manaraka ny fenitra UIC
Ady teknolojika ny fametrahana ny refin'ny elanelan'ny lalamby andehanan'ny fiaran-dalamby.
Tsy mitovy avokoa izy ireo, misy ny mahatratra 3m ny elanelany, raha ny tetikasan'i Hitler tany Allemagne, hanaovana ny lalamby mandeha any Europe taorian'ny ady lehibe faharoa, tsy tanteraka anefa izany.
Misy kosa ny anisan'ny kely indrindra ny elanelana 381mm any Anse, ampandehanana fiaran-dalamby mpitondra mpitsangatsangana.
Ny eto Madagasikara dia 1000mm na 1m ny elanelan'ny lalamby mirefy 877Km, namboarina tamin'ny andron'i Gallieni, natomboka ny taona 1901, ary vita tsikelikely amin'ny ampahany ny 31 oktobra 1904, mampitohy an'i Brickaville sy Fanovana (102km), ary ny 1 aprily 1909, mihazo an'Antananarivo (169km).
lundi, 10 février 2020 14:43
Toamasina: Tovolahy iray natelin’ny ranomasina omaly, vatana mangatsiaka no hita androany maraina
Tovolahy iray avy any Vakinankaratra, miasa aty Toamasina, no natelin’ny ranomasina raha niara-nilomano tamin’ireo namany roa hafa omaly alahady 9 febroary 2020.
Androany maraina no hita ny razana.
lundi, 10 février 2020 14:34
Ambositra: Fiara avy nandevina nisy nitora-bato, nisy naratra
Vaky ny fitaratry ny fiara, naratra ny sasany tamin’ireo mpandeha tao anatiny. Izay no nanjo ireto fiara 4x4 miisa roa nitondra Relijiozy avy nandevina tany Imady, omaly hariva. Nisy nanakan-dalana izy ireo tsy lavitra ny toerana atao hoe : Fasimena ary dia niharan’ny tora-bato.
Frera iray no voalaza fa naratra, ary nentina haingana notsaboina tao amin'ny hopitaliben’Ambositra.
Depiote Hasimpirenena sy Depiote Leva: Tsy nandingana ny tokonam-baravaran’i Tsimbazaza dia nosoloina
Nilatsaka ny didin’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana (Arrêt n°01-HCC/AR) androany 10 febroary 2020, milaza fa dia hita fototra ny fahabangan- toeran’ny depiote isany Rasolomampionona Hasimpirenena voafidy tao Fandriana sy Raveloson Ludovic Adrien voafidy tao Mahabo, araka ny taratasy nataon’ny filohan’ny Antenimieram-pirenena Razanamahasoa Christine.
Volahaingo Marie Thérèse: Miverina ho depiote ao Tsimbazaza
Mandray ny toerana maha solombavam-bahoakan’i Madagasikara azy i Volahaingo Marie Thérèse. Manamafy izany ny didy (Arrêt n°02-HCC/AR) ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana androany 10 febroary 2020.
Mitsahatra hatreo koa ny maha solombavam-bahoaka an’i Ravenasy Jean Emanielson, mpisolotoerana an’i Volahaingo Marie Thérèse tao Tsimbazaza, nandritra ny fotoana naha mpikambana tao amin’ny governemanta an’ity farany ny 24 jolay 2019 ka hatramin’ny 25 janoary 2020.
Solombavam-bahoaka voafidy tao Bealanana, Faritra Sofia, narotsaky ny antoko MMM (Malagasy Miara Miainga) i Volahaingo Marie Thérèse.
(Jereo Sary nomena)
lundi, 10 février 2020 12:26
Morondava: Tsy tafarina hatramin’izao ny biraon'ny Faritra Menabe may tamin’ny aogositra 2018
Mbola vatan-drindrina no mijoro 18 volana taorian’ny nahamay ny biraon'ny Faritra Menabe eto Morondava ; tsy mbola voaharina hatramin'izao. Nahita maso izany ny Minisitry ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola Randriamandrato Richard nandritra ny diany teto Morondava ny sabotsy 8 febroary 2020 teo.
Ny 06 Aogositra 2018 no nahamay ity biraon’ny Faritra ity, ary potika hatramin’ny lisi-pifidianana tamin’izay.
Akoson’aratra (court-ciruit) vokatry ny fitarihana jiro amin’ny asa ataon’ny BNGRC no tombanana fa fototry ny afo nanomboka tamin’ny roa tolakandro teo, io andro io, ary adin’ny telo taty aoriana vao voafehy ny fihitaran’ny afo noho ny fitsokan’ny rivotra sy ny akora nandrafetana ny trano mora mirehitra, satria saika vita amin’ny hazo ny ankamaroany. Tsy manana “pompier” rahateo ihany koa ny Kaominina ambonivohitr’i Morondava fa fiaraben’ny ASECNA no namonjena namonoana ny afo.
lundi, 10 février 2020 10:04
Toliara: Zazalahy kely maty nisy namono, niala ny voamasony
Tao anaty efitranon-tsekoly amin’ny sekolim-panjakana iray eo Antaninarenina, eto Toliara, no nahitana ny vatana mangatsiakan’ilay zazalahy kely, tokony ho enina taona eo. Niboridana ary niala ny voamasony roa tamin’ny nahitana azy.
Nanokatra fanadihadiana avy hatrany ny mpitandro filaminana ikarohana izay nahavanon-doza.